कन्साई क्षेत्र!6प्रान्तहरूमा गर्न उत्तम चीजहरू - Best of Japan
जापानमा, कान्टो क्षेत्र जहाँ टोकियो अवस्थित छ र क्यान्टो क्षेत्र जहाँ क्योटो र ओसाका अवस्थित छन् प्राय जसो तुलना गरिन्छ। कन्साई क्षेत्रको मुख्य विशेषता यो हो कि क्योटो, ओसाका, नारा, कोबे, आदि जस्ता प्रत्येक क्षेत्र धेरै अनौंठो हुन्छ। यदि तपाईं कन्साई क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं विभिन्न व्यक्तिगत पर्यटन गन्तव्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
कन्साईमा स्वागत छ!
क्योटो, जापान सिटीस्केप हिगाशीयामा ऐतिहासिक जिल्ला = शटरस्टक
कन्साईको नक्शा = शटरस्टक
कन्साई क्षेत्र जापानको सबैभन्दा ऐतिहासिक र परम्परागत क्षेत्र हो। विगतमा, अदालतले जापानको राजधानी नारा प्रान्तमा राख्यो, त्यसपछि राजधानी क्योटोमा सारियो। चिनियाँ संस्कृतिले नारा क्षेत्रमा दृढ रूपमा प्रभाव पारेको धेरै पुराना मन्दिरहरू छन्। त्यस पछि, क्योटोमा जहाँ शाही परिवार र कुलीनहरू १००० बर्ष भन्दा बढी समयसम्म बसोबास गरिरहेका थिए, एक परिपक्व जापानी संस्कृतिको जन्म भयो।
ओसाका प्रान्त र ह्योगो प्रान्तले समुद्रको सामना गरिरहेका यी शहरहरूलाई पुरानो समयदेखि समर्थन गर्दै छ। ओसाका प्रान्तमा, व्यापारीहरूको शहरहरूको विकास भयो। ह्योगो प्रान्तमा, १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि पश्चिमी देशहरूसँग व्यापारको माध्यमबाट व्यापार बन्दरगाह र कारखाना क्षेत्र फैलियो।
कन्काइ क्षेत्रको दक्षिणी भागमा अवस्थित वाकायामा प्रान्तमा, बौद्ध धर्मलाई तालिम दिने पवित्र ठाउँहरू सहरी क्षेत्रबाट टाढा राखिएको थियो। विशेष गरी, वाकायामा प्रान्तमा कोयासनले हालै धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको छ।
कन्साईको बारेमा सिफारिस गरिएका लेखहरू
अब, कृपया कन्साई क्षेत्रको प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण गर्नुहोस्। तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ?
शिगा प्रान्तमा जापानको सब भन्दा ठूलो ताल, ताल बिवा छ। यदि तपाईं यस तालमा रमाईलो डु take्गा लिनुभयो भने, तपाईंसँग आरामदायक समय हुनेछ। बिवा ताल तालको वरिपरि ऐतिहासिक मन्दिर र महलहरू छन्। यसबाहेक, परम्परागत जापानी दिगो जीवन विरासतमा आएको छ। मलाई लाग्छ कि यो यात्राको लागि खोजी गर्न उनीहरूलाई रोचक छ।
जब तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्नुहुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ शिगा प्रान्तमा भ्रमण गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग खाली समय छ। सर्वप्रथम, जापानको सबैभन्दा ठूलो ताल, बिवा लेकमा "मिशिगन" डु pleasure्गा लिनु चाखलाग्दो हुनेछ। तालको वरिपरि पुराना मन्दिरहरूको वरिपरि घुम्नु राम्रो विचार हो। ...
जापानमा दुई "क्योटो" छन्। एउटा क्योटो शहर हो जुन धेरै पुराना मन्दिरहरू र मन्दिरहरूको लागि प्रसिद्ध छ। र अर्को क्योटो प्रान्त हो जहाँ धेरै परम्परागत जापानी ग्रामीण क्षेत्र र माछा मार्ने गाउँहरू बाँकी छ। यदि तपाईंले क्योटोमा रूचिलाई विस्तृत अर्थमा हेर्नुभयो भने, तपाईंको क्योटो यात्रा अझ समृद्ध हुनेछ।
त्यहाँ मियामा जस्ता राम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् र क्योटो प्रान्तमा Ine जस्तै अनौंठा माछा मार्ने गाउँहरू। क्योटोको कुरा गर्दा क्योटो शहर, यस प्रान्तको केन्द्र, प्रख्यात छ, तर किन यसको वरिपरि अचम्मका क्षेत्रहरूमा जाने छैन? क्योटो प्रान्तको मियामाइने बाह्यरेखा क्योटो प्रान्त नक्शाको सामग्रीको तालिका
यदि तपाईं जापानी बुढ्यौलीमा रूचि राख्नुहुन्छ भने, नारा प्रान्त धेरै आकर्षक गन्तव्य हो। यस प्रान्तमा क्योटो शहरमा मन्दिर र मन्दिरहरू भन्दा पुरानो युगमा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक भवनहरू छन्। नारा प्रान्तमा, तपाईले अत्यन्त शान्त र गहिरो यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ।
यदि तपाईं क्योटो स्टेशनबाट ट्रेनमा नारा शहर जानुहुन्छ भने, तपाईं चकित हुनुहुनेछ कि त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा अझै शान्त पुरानो संसार बाँकी छ। यसबाहेक, यदि तपाई इकारुगा जस्ता क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने तपाई पुरानो अवधिको जापान भेट्न सक्नुहुन्छ। नारा प्रान्तले तपाईंलाई जापानमा आमन्त्रित गर्दछ कि ...
किशिवाडा डन्जिरि फेस्टिवल = शटरस्टकको एक छवि
टोकियो र ओसाकाको तुलनामा ओसाकामा मानिसहरू अझ जीवन्त हुन सक्छन्। ओसाका क्षेत्रहरुमा परम्पराहरु छन् कि व्यापारीहरु धेरै पहिले देखि चतुरता को कल्पना गरेर बाँचे छ। यदि तपाईं ओसाका प्रान्तमा किसिवाडा जस्ता शहरहरूमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं जीवित र शक्तिशाली मानिसहरू महसुस गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
ओसाकाको कुरा गर्ने हो भने यो ओसाका शहरको डोटनबोरीमा चम्पी नियोन साइनबोर्डका लागि प्रसिद्ध छ। ओसाका मा एक शक्तिशाली मान्छे को संस्कृति छ। त्यो ओसाकामा मात्र नभएर समग्र ओसाका प्रान्तमा पनि भन्न सकिन्छ। किन तपाई ओसाका राम्ररी मन पराउनुहुन्न? सामग्रीको तालिका
कोयासन, जापानमा फ्युनिकुलर रेलवे = शटरस्टक
वाकायामा प्रान्तको विशाल हिमाली क्षेत्र छ। त्यसकारण, क्योटो, नारा, ओसाका आदि वरपरका क्षेत्रको तुलनामा विकास ढिला भयो। फलस्वरूप, वाकायामा प्रान्तले जापानमा भएका रहस्यमय चीजहरू छोडिदियो। वाकायामा धेरै रोचक छ!
वाकायामा प्रान्तमा पवित्र र परम्परागत विश्वहरू छन् जुन ओसाका र क्योटो जस्ता शहरी क्षेत्रहरूमा अवस्थित छैनन्। यस प्रान्तमा धेरै पर्वतहरू छन्। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा बौद्ध धर्म जस्ता तालिम दिने ठाउँहरू स्थापना र मर्मत गरिएको छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई कोयासन जानुहुन्छ, तपाई सक्षम हुनुहुनेछ ...
ह्योगो प्रिफेक्चर पश्चिम जापानबाट जापानको केन्द्रमा क्योटो र ओसाका जस्ता केन्द्रमा अवस्थित छ। यसै कारण, ह्योगो प्रान्तमा, पश्चिम जापानबाट आक्रमण गर्ने सेनाहरूलाई रोक्न विशाल किल्लाहरू निर्माण गरिएको छ। प्रतिनिधि Himeji महल हो। तपाईं यस सुन्दर महलमा समुराईको समयको वातावरणको मजा लिन सक्नुहुनेछ।
ह्योगो प्रान्तमा हिमेजी क्यासल छ, पर्यटक आकर्षण जसले जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। लगभग सबै महल टावर र यस महलको टावरहरू बाँकी छन्। यस किल्लाले चित्रण गरेको रूपमा, ह्योगो प्रान्तमा जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पर्यटक आकर्षणहरू छन्। तपाई ह्योगो प्रान्तमा किन गहिरो यात्रा गर्नुहुन्छ? HyogoHimeji को सामग्रीहरूका तालिका